Posted by pandora at 1:21 AM
ဘာပဲပြောပြော အလကားဖတ်ရတဲ့ ကဗျာလေးပေမယ့် ကောင်းပါတယ်။
အလကား အလကားဆိုလဲ အလကားပဲတင်းမှ နော်။
Nothing is free baby :)
မျက်နှာဖြူဘိုစာတွေမတတ်ပေမဲ့ ကိုချစ်ဖေရှေ့မှာ အလကားနေရင်း ဖရီး ကိုဒမ်းပေါင်းလို့ရတိုင်း အလကားလို့ လာအော်ရင်တော့ တွေ့မယ် အလကားနေရင်း အေးအေးမနေပဲ အလကားလာအော်ရင် အလကားပြောမိတော့မယ်.
ဟက်ပီးရယ်တဲ့မှ နယူးယီးယားပါဗျား။ အလကားနှစ်သစ်တော့ မဟုတ်တန်ကောင်းပါရဲ့ ။
freedom ချင်သွားတယ် :D
ံHappy New Year!
Hope we will have happy Independence Day.
အလကားရလို့ လာအော်သွားတယ်... :D
အလကားနေရင်းလည်း.... ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတွေလည်း... အလကားတင်သွားပါ၏။
နောက်ပြီးတော့လည်း... လင့်ခ်လေးကို ယူသွားပါတယ်ဗျာ....။ အသစ်တင်တိုင်း ဖတ်ချင်လို့ပါ...။ အလကားနေရင်း ဖတ်နေချင်လို့....ဟီးးးးးးး
(ကိုယ့်နာမည် ကိုယ်ပြန်ကြည်မိတာ... သိပ်လှသွားတယ်ထင်မိ၏....အဟီးးးးးး)
အလကားကျော်စွာ ကိုတောင် သတိရမိသေးတယ်။
အလကားပေးတော့မလိုလို အလကားနေရင်း ကြော်ငြာ ထားတဲ့ အလကား အလကား freedom ကြီး မဟုတ်လား?
အဲ... ရော များ ရော သွားသလား?
Yaw Mang said...
မင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်သစ်ပါ အစ်မ.... အစ်မbolgကိုဖတ်နေတာကြာပြီ...ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ အန်တီမေငြိမ်း ကတဆင့်ရောက်လာတာ။ အခုမှcomment ရေးဖူးတယ်။ အစ်မက ရီစရာကောင်းတယ်နော်... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ အစ်မ ကြည်လင်အေးချမ်း ပါစေ.......
အလကား (Free) ဆိုပေမယ့် ..
Terms & Conditions Apply ဆိုတဲ့
စာလုံး သေးသေးလေးတွေ ပါသေးလား ရှာကြည့်ပါဦး ..
ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံး မှာ ဒါလေး အလှဆုံး လို့ထင်တယ် အစ်မပန်ရေ
သေချာတယ် ဒီကဗျာ အလကားမရဘူး
"the best things in life are free" ဆိုတာလေးကို ရွတ်မိတယ်... သိပ်လှတဲ့ ကဗျာပါပဲ အစ်မပန်ဒိုရာရယ်...
အလကား ဖတ်သွားတယ်ဗျို့ 
အောက်က မှတ်ချက်ကို အလကားနေရင်း ကြိုက်မိတာ။ မခက်လား..။
မင်းလည်း အလကား၊ ငါလည်း အလကား၊ အလကား လည်း အလကား ဆိုတဲ့ ကာတွန်းလေး သတိရသွားတယ်။
အလကားတွေကို လက်လီလက်ကား ပေးနေတယ်ပေါ့လေ။
alakar so loh win phat thwar tar
a taw kyite thwar par tae.